Razafimamonjy Noro Hanitra il y a 5 années
Rahary il y a 6 années
Isa Roa Telo sy ny dingana vaovao hatrehiny
Mpanakanto nentina teto ny Isa roa Telo ary dia manohy ny ezaka natombony izany tarika izany. Tafatafa natao tamin’i Liantsoa no aroso eto.
Fetin’ny Paka ao Antsirabe
Paka 2015 ao Antsirabe mikendry ny ho tsara hatrany
Voapetaka manerana ny tanàna tamin’ny faran’ny herinandro teo ny filazana sy ny peta-drindrina rehetra. Vonona ny ao an-toerana hitorajofo miaraka amin’ireo mpanakanto malagasy efa fanta-daza. Zary kolontsaina ny Paka ao Antsirabe izany. Indrisy, hiakatra ny saran-dalana mandritra ny fety.